> Resource > Mac > Ladnaansho My Photos Mac
Marka photos yihiin laga badiyay ka qalab aad iyo dhacdo in aad adigu leedahay Mac ah, aad u malaynayso waxa suurto gal ah in aad hesho dib u photos lumay. Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ku Mac? Dhab ahaan jira tahay dhowr xal oo aad u adeegsan kartaa.
Xalka 1: Ladnaansho photos aan kaga imaanayo hore haddii ay suurtogal tahay
Solution 2: Ladnaansho photos aan la isku halayn karo Mac kabashada sawir utility
Xalka 3: Ladnaansho sawiro ku Mac la Wondershare Photo Recovery
Xalka 1: Ladnaansho photos aan kaga imaanayo hore haddii ay suuragal tahay
Haddii photos waxaa si toos ah looga badiyay ka Mac sida maktabadda iPhoto, waxaad had iyo jeer dib u soo ceshano kartaa sawiro lumay ka Time gurmad Machine haddii ay abuuray tahay ama ku kaydsan ee la soo dhaafay aad Time gurmad Machine.
Wixii user oo la socday inay ka soo kabsadaan sawiro ka camera digital ama aaladaha kaydinta dibadda kale ee Mac, waxaa kale oo suurtogal ah in ay dib u hanato sawiro ka gurmad aad Mac ama meel kale.
Guud ahaan, gurmad ah waa habka ugu fudud ee isticmaala inuu ka soo kabsado photos lumay. Laakiin fursadaha helitaanka dib photos lumay ka jira oo leh waxtar leh soo kabsado photos aan software Mac.
Xalka 2: Ladnaansho photos aan la utility kabashada sawir lagu kalsoonaan karo Mac
Kuwa Google "My Photos Ladnaansho" ee internet-ka, waxa laga yaabaa in wax yar uga caroodeen, sababta oo ah waxay heli doontaa barnaamijka la odhan jiray "My Photos Ladnaansho" marka hore. In kastoo ay xaqiiq tahay awood leh, "My Files Ladnaansho" waa barnaamij Windows ah oo kaliya. Nasiib wanaag waxaa tahay barnaamijyo badan oo soo kabashada Mac sawir oo sida ugu fiican ee "My Photos Ladnaansho" waa. Here're qaar ka mid ah oo aan jeclaan lahaa in aan ku talinaynaa in aad u:
Top 4: Rescue Card
Rescue Card waa codsi soo kabashada sawir yar Mac la interface cad oo faahfaahsan. Waxa inta badan ka caawisaa in aad ka bogsato tirtiray ama formatted sawiro ka noocyada kala duwan ee kaarka, ay ka mid yihiin kaarka SD, kaarka CF, kaarka XD, ul soo xusuusta, iwm
1 Tallaabo-tallaabo howlgal soo kabashada oo waa u fududahay xitaa newbie users Mac;
2 rakibo ee barnaamijka waa mid aad u yar (620KB).
1 waa codsi u yar, xawaaraha iskaanka waa in yar oo gaabis ah. Haddii aad rabto in aad soo kabsado sawiro ka Mac drive deegaanka adag, waxaa laga yaabaa inay qaataan waqti aad u badan;
2 Dhamaan sawirada helo waa la previewed karo. Laakiin waxay ku jirin liiska dhismayaasha cad;
3 Waxa aanu taageeraan sidii qaabab sawir iyo aaladaha kaydinta badan barnaamijyada kale ee liiska, sawiro iyo video nooc ka mid ah oo kaliya.
Yodot Mac Photo Recovery waa codsi xoog leh oo awood aad si loo soo celiyo photos lumay ka Mac adag drive, kaadhka xusuusta, USB drive, iPod iyo in ka badan. Waxa ay taageertaa soo kabashada xogta ka drive waddaa nidaam file sida HFS +, HFSX iyo baruurta.
1 Barnaamijka waxaa aad bixisaa laba hababka soo kabashada gaar ah: kabashada sawir tirtiray iyo soo kabashada sawir laga badiyay,
2 noqon doonaa inaad awoodo inaad kala saaro faylasha sida ay horyaalka, size, taariikhda, kordhin file si aad ka heli kartaa faylasha aad rabto in aad si fudud u soo kabsado,
3 Waxaa soo kabanayo photos, videos iyo files audio ku dhawaad ​​nooc oo dhan,
4 "ceeriin Search" doorasho ka caawinaysaa in aad ka bogsato photos cayriin xitaa laga badiyay aad.
1 xawaaraha iskaanka waa gaabis ah marka aad rabto in iskaan drive adag;
2 Sida caadiga ah laga helo sawiro aan lagu soo bandhigi doonaa magacyada asalka ah.
AppleXsoft Mac Photo Recovery waa dhamaystiran Mac kabashada sawir qalab la interface dareen iyo sidoo kale algorithms kabashada cusub. Marka laga reebo ka kaydinta warbaahinta caadiga ah, qalab this sidoo kale soo kabanayo sawiro ka DVD / CD, MP3 ciyaaryahan oo PCMCIA. Waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan Mac Photo Recovery ee suuqa. Sabuurka, qalab this ma taageeri kabashada sawir ka drive adag.
1 Waxa ay taageertaa noocyada file ka badan in kale 3 qalab oo liiska ku jirta, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files audio iyo waraaqaha;
2 si fudud Waxaad dooran kartaa noocyada file aad rabto in aad soo kabsado iyo brand camera digital on interface cad ee codsiga.
1 Haddii aad rabto inuu ka soo kabsado sawiro ka Mac drive adag, AppleXsoft Mac Photo Recovery waa ciirsi;
2 Sida kabashada a photo awood badan, xawaaraha iskaanka barnaamijkan gaabiska yahay;
Takhasusay soo kabashada sawir Mac, Wondershare Photo Recovery bixisaa laba firfircoon soo kabsado hababka dadka isticmaala Mac dib u soo ceshano lumay, tirtiray, formatted ama sawiro xitaa laga Mac, camera digital, telefoonka gacanta, kaadhka xusuusta, USB drive iyo aaladaha kaydinta ugu. The engine kabashada awood Wondershare Photo Recovery caawisaa in aad ka bogsato photos lumay on Mac magacyada asalka file, taariikhaha toogtay, Oo waddooyinkeeda oo lagu kaydiyo. Awood u eegis sawir wuxuu hubinayaa in aad si ay u qiimeeyaan tayada kabashada ka hor.
1 Waxa aad bixisaa laba hababka iskaanka awood badan, soo kabashada file lumay iyo soo kabashada cayriin;
2 Waxa ay taageertaa sawir, videos iyo soo kabashada file maqal ah ka dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka lagu kaydiyo, oo ay ku jiraan Mac adag drive, iPod (Nano, Classic, shaandheyn), USB Drive, drive dibadda adag, ulaha xasuusta, kaadhka xusuusta iyo aad u badan;
3 noqon doonaa inaad awoodo inaad ku eegaan sawirada magacyada asalka file, taariikhaha iyo waddooyinkiisa kaydinta toogashada ka dib markii iskaanka;
4 Xawaaraha iskaanka ee qalabkan waa yaab.
1 engine ayaa iskaanka barnaamijkani waa u awood badan yahay in helo dhammaan faylasha ka drive, oo ay ku jiraan kuwa thumbnails aan waxtar lahayn. Haddii aad rabto in aad soo kabsado sawiro ka drive weyn, waxaa laga yaabaa inay qaataan waqti ka mid ah si aad u hesho waxa aad dhabtii doonaysid.
Tallaabada 1 Waxaad u baahan doontaa inaad doorato habka soo kabasho si ay u bilaabaan kadib markii rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Photo Recovery aad Mac.
Tallaabada 2 Codsiga tusi doono oo dhan qoruhu / muda aad Mac, oo aad dooran kartaa mid ka mid ah oo guji "Scan" inaad raadiso photos lumay.
Tallaabada 3 In dhamaadka, dhammaan sawiro laga heli lagu soo bandhigi doonaa "File ture" ama "File Jidka" category. Waxaad ku eegaan karo oo dhan photos helay. Dooranaysaa in aad sawiro lumay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.
Waxa aad niyadda ku hayaan inay marka la isticmaalayo "My Photos Ladnaansho" Mac:
1 Haddii photos yihiin laga badiyay ka camera digital ah ama qalab kale oo lagu kaydiyo, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad Mac si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
2 lumay xogta digital si fudud loo overwritten karaa iyadoo xogta cusub oo ku saabsan qalab aad, aad si fiican u rakibi lahaa codsiga on xijaab kale oo aad Mac, ama aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka qalab lagu kaydiyo dibadda, sida kaadh SD iyo drive USB.
3 ma waxaad ku hayn kartaa sawiro kabsaday in ay goobta asalka ah si looga fogaado in xogta overwritten aad.
Sida loo sii qulquli Video ka Mac in PlayStation3